सुन बाटुली' हिट भए पनि किन खिन्न छन् निश्चल बस्नेत? | YesKhabar
सुन बाटुली' हिट भए पनि किन खिन्न छन् निश्चल बस्नेत?
२०७८ साल पुष ३ गते, शनिबार ०७:४८ PM
फिल्म निर्देशनमा स्थापित निश्चल बस्नेत म्युजिक भिडिओमा समेत सक्रिय छन्। भिडिओ निर्देशनसँगै अभिनय गरेर, कहिले गाएर त कहिले नाचेर उनी नयाँ कामहरू गरिरहेका हुन्छन्।
फरक काम गर्ने उनको रहरले स्रोता-दर्शकबाट पनि माया पाइरहेको छ। 'पर्व' फिल्मको चर्चित गीत 'काले दाइ' तपाईंलाई पक्कै याद होला। मीना निरौलाका साथमा निश्चलले यो गीत आफै‌ं गाएका थिए।
अहिलेको सन्दर्भ भने निश्चलको डान्सको हो। 'सुन बाटुली' गीत केही सातादेखि चर्चामा छ। गीतको भिडिओमा निश्चलले स्वस्तिमा खड्का र समूहसँग नाचेका छन्। र, यो नाच अहिले धेरैले मन पराएका छन्। यसको डान्स स्टेप मन पराएर टिकटकमा हजारौंले भिडिओ बनाएका छन्।
निश्चलले नै निर्देशन गरेको सुन बाटुली गीत कालीप्रसाद बाँस्कोटाको स्वर, शब्द र संगीतमा बनेको हो। भिडिओमा कालीप्रसाद स्वयं पनि देखिएका छन्। सुन बाटुलीको संगीत र प्रदीप लामाको कोरिओग्राफीले धेरैलाई तानेको छ।
यही गीतको भिडिओ निर्देशन र डान्स सिकाइ अनुभवबारे हामीले निश्चलसँग कुराकानी गरेका छौं।
निश्चलका अनुसार झन्डै दुई वर्ष पहिले महामारीअघि उनलाई कालीप्रसादले यो गीत सुनाएका थिए।
'गीत सुन्नेबित्तिकै एकदम राम्रो छ, यसमा पर्फम गर्दा एकदम मजा आउँछ भन्ने हिसाबले मैले निर्देशन र डान्ससमेत गर्ने निर्णय गरेँ,' निश्चलले भने। निश्चललाई जस्तै स्वस्तिमालाई पनि गीत मन परेकाले नाच्ने भइन्।
निश्चल र स्वस्तिमाको उपस्थितिले पनि सुन बाटुलीप्रति मान्छेलाई आकर्षित गर्ने नै भयो। निश्चलका अनुसार स्वस्तिमा र उनी जबसम्म गीत मन पर्दैन तबसम्म भिडिओमा सँगै काम गर्दैनन्।
'स्वस्तिमा र मैले सँगै काम गर्दा रमाइलो हुन्छ। तर हामी फ्याट्टै निर्णय लिएर काम गर्दैनौं। दुबैलाई गीत मन परेपछि सल्लाह गरेर समय लिएर काम गर्छौं।
यी दुईले सल्लाह गरेर काम गरेका 'नाच फिरिरी', 'सरकारी अड्डा', 'चट्ट रुमाल' जस्ता गीतले स्रोताको ध्यान तान्न सफल पनि भएका छन्।
म्युजिक भिडिओ र कहिलेकाहीँ फिल्ममा सँगै देखिने वास्तविक जोडी निश्चल–स्वस्तिमालाई अनस्क्रिन हेर्न चाहनेको संख्या ठूलो छ। हालै यो जोडीको मुख्य भूमिका भएको फिल्म 'घामड शेरे' युट्युबमा सार्वजनिक भएको दोस्रो हप्तासम्म ट्रेन्डिङको शीर्ष स्थानमा छ।
घामड शेरेको 'साली मनपर्‍यो' का संगीतकार र गायक पनि कालीप्रसाद नै हुन्। निश्चल र कालीप्रसादको सहकार्यमा भएका केही गीत यसअघि नै लोकप्रिय छन्।
निश्चलको निर्देशनमा बनेको 'लुट २' को चर्चित गीत 'ठमेल बजार' कालीप्रसादको संगीतमा बनेको थियो। त्यसपछि कालीप्रसादले आफ्नै संगीतमा गायिका अस्मिता अधिकारीसँग गाएको 'घामड शेरे' को 'साली मनपर्‍यो' मा निश्चल र स्वस्तिमाले अभिनय गरेका थिए। यो पनि स्रोता दर्शकले मन पराएको गीत हो।
कालीले निश्चललाई सुन बाटुली घामड शेरेमा काम गर्ने क्रममा निश्चललाई सुनाएका हुन्।
'लिप सिंक' र कथा नराखी डान्स पर्फमेन्सलाई हाइलाइट गरिएको यो भिडिओ निर्देशन गर्नभन्दा निश्चलका लागि नाच्ने काम चुनौतीपूर्ण थियो। भिडिओमा दर्शकलाई नचाउन सक्ने ऊर्जासहितको नाच प्रस्तुत गर्ने सोच राम्रो भए पनि निश्चलका लागि भने यो चुनौतीपूर्ण काम थियो।
'स्वस्तिमाले डान्स स्टेप चाँडै टिप्छिन् तर मलाई समय लाग्छ,' उनले भने, 'डान्स सिक्न सबभन्दा बढी समय लागेको गीत यही हो।'
उनले यसअघिका धेरैजसो डान्स छायांकन स्थलमा कोरिओग्राफरले देखाएकै भरमा नाचेका थिए।
'अभ्यास चाहिने खालको गीतमा एक दिन वा दुई दिन समय दिँदा पुग्थ्यो। तर सुन बाटुलीमा अलि लामो समय दिनुपर्‍यो,' निश्चलले भने।
साली मनपर्‍यो गीतमा नाच्नका लागि हप्ता/दस दिन समय लागेको उनले बताए। सुन बाटुलीका लागि भने निश्चल, स्वस्तिमा र अरू डान्सरले गएको दसैंअघि सुरूमा दस दिन सामूहिक अभ्यास गरेका थिए।
उनले भने, 'त्यसपछि फेरि दस दिन थपियो। तै पनि पुगेन। दसैं सकियो। तिहार सकियो। अभ्यास गरेको गरेकै थियौं। झन्डै एक महिना बितेपछि बल्ल सोचेजसरी पर्फम गर्न सकिन्छ भन्ने अवस्थामा पुग्यौं।'
सुन बाटुली तीन मिनेटभन्दा थोरै लामो गीत छ। यो गीत छायांकन गर्दा पनि तीन दृश्यमा बाँडिएको छ। उनका अनुसार पूरै गीत एकैपटकमा पर्फम गर्ने हिसाबले अभ्यास गरियो। छायांकन क्रममा पनि नाचको निरन्तरता नबिगारी तीन टेकमै खिच्ने सोचअनुसार गरिएको उनले बताए।
भिडिओ भक्तपुर दरबार स्क्वायर, सपिङ कम्प्लेक्स र ठमेलको क्लबमा खिचिएको छ। डान्स अभ्यासका लागि समूहले महिना बढी खर्चे पनि भिडिओ खिच्ने काम भने एक दिनमै सम्पन्न भएको थियो।
संगीतकार तथा गायक कालीप्रसादका अनुसार फंक अफबिटको फ्युजन भएको गीत सुन्दै नाचूँ नाचूँ लाग्ने खालको हुन्छ। पहिला झ्याउरे लय र त्यसपछि केही फरक बिट प्रयोग गर्दै फंक बिटमा गीत बनाइएको हो।
कालीप्रसाद र निश्चल दुबैको उद्देश्य गीतले धेरैलाई नाच्ने मुडमा पुर्‍याओस् भन्ने थियो।
सुन बाटुली निश्चलको आफ्नै प्रोडक्सन ब्ल्याक हर्सको प्रस्तुति हो। गीतको अडिओ र भिडिओका विभिन्न पक्षलाई स्रोता दर्शकले मन पराएका छन्। सार्वजनिक भएको तीन हप्तामा गीतले पर्याप्त चर्चा बटुलिसकेको छ। युट्यबमा बीस लाख बढी भ्युज पाएको गीतले अहिले पनि धेरैलाई नचाइरहेको छ। टिकटकमा गीतले विशेष स्थान बनाएको छ। गीतको चर्चा र सफलताले गीतमा जोडिएका सबैलाई सन्तुष्टि दिने नै भयो।
निश्चल पनि अहिले खुसी छन्। तर उनलाई एउटा कुराले भने अझै खिन्न बनाइरहेको छ। यसको कारण हो, गीतको छायांकन हुने बेला निश्चलले सोचेजत्तिकै ऊर्जाका साथ नाच्न सकेनन्। एक महिनाजति समय अभ्यास गरेर पनि भिडिओ छायांकन हुने बेला निश्चलको खुट्टामा समस्या देखियो।
'पहिलो टेक सकिँदा नसकिँदै दुबै खुट्टाको तिघ्रा दुखेर पूरा ऊर्जासाथ नाच्न पाइनँ। अब रोकिन्छ कि, अब सकिन्नँ कि भन्दैभन्दै नाच्नुपर्‍यो,' उनले भने।
निश्चलका अनुसार कोरिओग्राफर र अरूले निश्चललाई 'बिस्तारै है बिस्तारै' भनिरहेका थिए। तर निश्चलको मनले भने 'अब एकैछिन, अब एकैछिन' भनिरहेको थियो।
निश्चल भन्छन्, 'कष्टका साथ नाच्दै बल्लतल्ल काम सकाइएको थियो। खुट्टामा समस्या नआएको भए भिडिओ हेर्न अझै मजा आउँथ्यो।'